Cultivate an Entrepreneurial Mindset for Career Progression
Business Help & Support Management Self-Employment Upgrade Yourself
အလုပ်မှာ တိုးတက်မှုရဖို့အတွက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လိုမျိုး စိတ်နေသဘောထားကို မွေးမြူပါ
လူတိုင်းက ကုမ္ပဏီမှာ ဘယ်လိုရာထူးနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေပါစေ၊ ဘ၀အပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းတိုးတက်မှုမှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြင့်ဆုံးကို ရရှိဖို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်ကြွယ်ဝမှုရရှိနေတဲ့လူနဲ့ သာမန်လူကို ခွဲခြားထားတဲ့အရာက စိတ်နေသဘောထားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင် အောင်မြင်မှုရရှိချင်တဲ့သူအတွက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားကို ကျင့်သုံးဖို့ ကျွန်တော်က အကြံပေးပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဆန်တဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုက လုပ်ငန်းခွင်ဘ၀မှာ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လိုမျိုး စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ပြုမူဖို့ မွေးမြူရမယ့် စိတ်နေစိတ်ထားတွေအတွက် အချက် (၇) ချက်ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေက သူတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှု ပြင်းပြင်းပြပြရှိကြ တယ်လို့ ကျော်ကြားပါတယ်။ ပြင်းပြတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုက ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ထားတာထက် ပိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အမြင့်မားဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အထိ ရောက်ရှိသွားစေပါတယ်။ ဒါက လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုနဲ့ ဘ၀ပြီးပြည့်စုံမှုတွေအတွက် သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအပေါ် စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ် မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာ စိတ်ကူးယဉ်မနေဘဲနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင် ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အရာတွေထဲမှာ ပိတ်မိနေတယ်လို့ မခံစားပါနဲ့။ အဲဒီအစား ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို တခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ သို့မဟုတ် တခြားဌာနမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင် အောင် စီစဉ်ပါ။
Customer တွေပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပါ။
လုပ်ငန်းခွင်က ၀န်ထမ်းတွေဟာ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေအကြောင်း စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ Customer တွေအပေါ် အာရုံစိုက်ဖို့ မကြာခဏ မေ့တတ်ကြပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ Customer တွေက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တခြားအရေးကြီးတဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ကိုယ်နဲ့ နေ့စဉ်ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း Customer တွေလိုပဲ လေးစားပြီး ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဘယ်လောက်အကောင်းဆုံး စိတ်ကျေနပ်စေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတာက ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တိုးတက်ရေးအတွက် ကြောရိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်အလုပ်အပေါ် တာဝန်ယူတာက အောင်မြင်တဲ့စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်သာမက အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဍတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် တခြားသူတွေကို အပြစ်တင်မယ့်အစား တာဝန်ယူပြီး အမှားထဲက သင်ယူကာ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေပါ။ အသင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်ရဲ့ မမျှတတဲ့ဆက်ဆံခံရမှုတွေအပေါ် ညည်းညူနေမယ့်အစား ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်ပြီး အသင်းမှာ အားကိုးရသူဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ တစ်ဖက်မှာ ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ကိုယ့်တွေရဲ့အရည်အသွေးကိုပြသခွင့်ရမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ ပရောဂျက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။
စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ထိရောက်မှုမရှိတဲ့ အလဟဿဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို ဖြစ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ကုမ္ပဏီသေးသေးလေးတွေမှာက ထုံးထမ်းစဉ်လာအရ အဆင့်ဆင့်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမရှိတဲ့အတွက် ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိစေတဲ့နည်းလမ်းတွေကို လုပ်နိုင်အောင် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ်က အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီမလုပ်နိုင်သေးရင် ကိုယ့်ကုမ္ပဏီမှာ ဘာတွေမှာထိရောက်မှု မရှိတာတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဘယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ တိုးတက်မှုတွေရအောင် ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။ ဒါက ကုမ္ပဏီအတွက် ရေရှည်မှာ တန်ဖိုးတက်လာအောင် ဖန်တီးနိုင်မယ့် ရွှေရောင်အခွင့်အလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်စားမှုတွေများလာတာနဲ့အမျှ ရလာမယ့်ဆုလဒ်က ပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်စားမှုတွေအပေါ် သဘောကျတာက စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကို သာမန်လူတွေကနေ ကွာခြားသွားစေပါတယ်။ ကိုယ်က ကြိုးစားပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်၊ စွန့်စားတာက တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တွေတိုင်းက သိကြပါတယ်။
အလုပ်မှာလည်း စွန့်ုစားမှုတွေကို မွေးမြူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေ ထွက်ပြီး အတွေးအခေါ်အသစ်တွေလက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်မှုတွေလုပ်ရန် စိတ်ပါဝင်စားခြင်းတွေကနေ စတင်နိုင်ပါတယ်။ စွန့်စားမှုရဲ့ ဆုလဒ်တွေက ကိုယ့်ကို စွမ်းရည်အသစ်တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီက စီမ့ခန့်ခွဲသူတွေဆီကနေ ကိုယ့်ကို ရာထူးတိုးပေးဖို့အတွက် သဘောတူညီချက်တွေကို ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
၀န်ထမ်းတော်တော်များများက ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုထက် ကိုယ့်အတွက် ရပိုင်ခွင့်တွေကိုသာ စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။ ၉ နာရီကနေ ၅ နာရီထိ အလုပ်လုပ်တာက ကုမ္ပဏီအတွက် လုံလောက်တယ်၊ ဒါကြောင့် နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာ လစာတိုးပေးတာ၊ အပိုဆုငွေရတာက မလွဲမသွေဖြစ်သင့်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကုမ္ပဏီက ဘယ်လောက်ပြန်ပေးနိုင်လဲဆိုတာက ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ကုမ္ပဏီရဲ့အောင်မြင်မှုကို ရှေ့ရှုတယ်၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တိုးတက်အောင် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကုမ္ပဏီမှာ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
စွန့်စားတီထွင်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုမှာ အရေးကြီးဆုံးရှုထောင့်က အိပ်မက်ကြီးကြီးမားမားမက်ခြင်းနဲ့ မဖြစ်နိုင် တဲ့အရာတွေကို ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက လက်တွေ့ကျပြီး တကယ်ဖြစ်နိုင် တဲ့အရာတွေကို တွေးကြတဲ့အတွက် အိပ်မက်တွေက သေးငယ်သထက် သေးငယ်လာကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အမှန်က အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ အိပ်မက်တွေကို ရရှိဖို့ အင်မတန်ကြိုးစားလာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကြိုးစားမှုက တန်ဖိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရာထူးက ဘာပဲဖြစ်ပါစေ၊ စွန့်စားတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါ၊ ကိုယ်လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့နေရာ မှာ အခွင့်အလမ်းတွေကို ရယူပါ။ စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်လိုမျိုး စိတ်နေသဘောထားကို မွေးမြူခြင်းက ကိုယ် စိတ်ကူးထားတဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိရာထူးမှာလည်း တိုးတက်မှုရရှိပြီး ကုမ္ပဏီအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထက်အာကာစိုးက ရန်ကုန်အခြေစိုက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို ကနဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့ Eco-system Builder တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် Phandeeyar မှာ ကနဦးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် အကြံပေးအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းကို သဘောကျသူဖြစ်ပါတယ်။
အလုပျမှာ တိုးတကျမှုရဖို့အတှကျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျလိုမြိုး စိတျနသေဘောထားကို မှေးမွူပါ
လူတိုငျးက ကုမ်ပဏီမှာ ဘယျလိုရာထူးနဲ့ပဲ အလုပျလုပျနပေါစေ၊ ဘဝအပျေါ စိတျကနြေပျမှုနဲ့ ငှရေေးကွေးရေးပိုငျးတိုးတကျမှုမှာ ဖွဈနိုငျသမြှ အမွငျ့ဆုံးကို ရရှိဖို့ မြှျောလငျ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အောငျမွငျကွှယျဝမှုရရှိနတေဲ့လူနဲ့ သာမနျလူကို ခှဲခွားထားတဲ့အရာက စိတျနသေဘောထားပဲဖွဈပါတယျ။
ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ဝနျထမျးပဲဖွဈတယျဆိုရငျတောငျ အောငျမွငျမှုရရှိခငျြတဲ့သူအတှကျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျလိုမြိုးစိတျနသေဘောထားကို ကငျြ့သုံးဖို့ ကြှနျတျောက အကွံပေးပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျငနျးရှငျဆနျတဲ့ စိတျအားထကျသနျမှုက လုပျငနျးခှငျဘဝမှာ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့အကြိုးကြေးဇူးတှကေို ပေးပါလိမျ့မယျ။ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျလိုမြိုး စဉျးစားတှေးချေါပွီး ပွုမူဖို့ မှေးမွူရမယျ့ စိတျနစေိတျထားတှအေတှကျ အခကျြ (၇) ခကျြကို အောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေ သူတို့လုပျနတေဲ့အလုပျတှပေျေါမှာ စိတျအားထကျသနျမှု ပွငျးပွငျးပွပွရှိကွ တယျလို့ ကြျောကွားပါတယျ။ ပွငျးပွတဲ့စိတျအားထကျသနျမှုက ကိုယျလုပျနိုငျတယျလို့ ထငျထားတာထကျ ပိုဖွဈစနေိုငျပွီး ကိုယျ့ရဲ့အမွငျ့မားဆုံးလုပျနိုငျတဲ့အထိ ရောကျရှိသှားစပေါတယျ။ ဒါက လုပျငနျးအောငျမွငျမှုနဲ့ ဘဝပွီးပွညျ့စုံမှုတှအေတှကျ သော့ခကျြဖွဈပါတယျ။
ကိုယျလုပျနတေဲ့အလုပျတှအေပျေါ စိတျအားထကျသနျမှုမရှိဘူးဆိုရငျ ကိုယျ မလုပျနိုငျတဲ့အရာတှပေျေါမှာ စိတျကူးယဉျမနဘေဲနဲ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့နရောရောကျအောငျ ကိုယျ့ရဲ့အလုပျကို ဘယျလိုတိုးတကျအောငျ လုပျနိုငျမလဲဆိုတာကို စဉျးစားပါ။ ကိုယျလုပျနတေဲ့အရာတှထေဲမှာ ပိတျမိနတေယျလို့ မခံစားပါနဲ့။ အဲဒီအစား ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ အရညျအခငျြးတှကေို တခွားလုပျငနျးနယျပယျ၊ သို့မဟုတျ တခွားဌာနမှာ ပွနျလညျအသုံးပွုနိုငျ အောငျ စီစဉျပါ။
Customer တှပေျေါမှာ အာရုံစိုကျပါ။
လုပျငနျးခှငျက ဝနျထမျးတှဟော ဖွဈလာနိုငျဖှယျရှိတဲ့အလုပျတာဝနျတှအေကွောငျး စဉျးစားနရေငျးနဲ့ Customer တှအေပျေါ အာရုံစိုကျဖို့ မကွာခဏ မတေ့တျကွပါတယျ။ ကုမ်ပဏီရဲ့ Customer တှကေ အရေးကွီးတယျဆိုတာမှနျပါတယျ၊ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ တခွားအရေးကွီးတဲ့ ပါဝငျပတျသကျသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ၊ ကိုယျနဲ့ နစေ့ဉျဆကျဆံနရေတဲ့သူတှအေားလုံးကိုလညျး Customer တှလေိုပဲ လေးစားပွီး ကောငျးကောငျး ဆကျဆံသငျ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့လိုအပျခကျြတှကေို ဘယျလောကျအကောငျးဆုံး စိတျကနြေပျစပွေီး ကိုယျ့ရဲ့ဝနျဆောငျမှုကို တိုးတကျအောငျလုပျနိုငျလဲဆိုတာကို စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အထကျလူကွီးတှကေို အကောငျးဆုံးဝနျဆောငျမှုပေးတာက ကိုယျ့ရဲ့အလုပျတိုးတကျရေးအတှကျ ကွောရိုးဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ကိုယျ့အလုပျအပျေါ တာဝနျယူတာက အောငျမွငျတဲ့စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှအေတှကျသာမက အောငျမွငျတဲ့သူတိုငျးအတှကျ အရေးကွီးဆုံးကဏ်ဍတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။ အမှားတှနေဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတှအေတှကျ တခွားသူတှကေို အပွဈတငျမယျ့အစား တာဝနျယူပွီး အမှားထဲက သငျယူကာ ပိုကောငျးအောငျလုပျဖို့အတှကျ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှပေါ။ အသငျးခေါငျးဆောငျတှနေဲ့အဖှဲ့ဝငျရဲ့ မမြှတတဲ့ဆကျဆံခံရမှုတှအေပျေါ ညညျးညူနမေယျ့အစား ကိုယျတိုငျက ဦးဆောငျဦးရှကျလုပျပွီး အသငျးမှာ အားကိုးရသူဖွဈအောငျလုပျပါ။ တဈဖကျမှာ ကိုယျ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ အခွအေနပေျေါမှာ စိတျဝငျစားမှုရှိပွီး ကိုယျ့တှရေဲ့အရညျအသှေးကိုပွသခှငျ့ရမယျ့ လုပျငနျးတာဝနျတှနေဲ့ ပရောဂကျြတှကေို လုပျဆောငျပါ။
စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေ ထိရောကျမှုမရှိတဲ့ အလဟဿဖွဈစတေဲ့အရာတှကေို ဖွဈခှငျ့မပွုပါဘူး။ ကုမ်ပဏီသေးသေးလေးတှမှောက ထုံးထမျးစဉျလာအရ အဆငျ့ဆငျ့လုပျရတဲ့လုပျငနျးစဉျတှမေရှိတဲ့အတှကျ ပိုပွီးထိရောကျမှုရှိစတေဲ့နညျးလမျးတှကေို လုပျနိုငျအောငျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။
အဲဒီလိုမြိုး ကိုယျက အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီမလုပျနိုငျသေးရငျ ကိုယျ့ကုမ်ပဏီမှာ ဘာတှမှောထိရောကျမှု မရှိတာတှဖွေဈနတေယျ၊ ဘယျလုပျငနျးစဉျမှာ တိုးတကျမှုတှရေအောငျ ဖွရှေငျးရမယျဆိုတာကို စဉျးစားထားသငျ့ပါတယျ။ ဒါက ကုမ်ပဏီအတှကျ ရရှေညျမှာ တနျဖိုးတကျလာအောငျ ဖနျတီးနိုငျမယျ့ ရှရေောငျအခှငျ့အလမျးပဲဖွဈပါတယျ။
စှနျ့စားမှုတှမြေားလာတာနဲ့အမြှ ရလာမယျ့ဆုလဒျက ပိုကောငျးလာမှာဖွဈပါတယျ။ စှနျ့စားမှုတှအေပျေါ သဘောကတြာက စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှကေို သာမနျလူတှကေနေ ကှာခွားသှားစပေါတယျ။ ကိုယျက ကွိုးစားပွီး စမျးသပျကွညျ့ရမယျ၊ စှနျ့စားတာက တနျဖိုးရှိတယျဆိုတာကို စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတှတေိုငျးက သိကွပါတယျ။
အလုပျမှာလညျး စှနျု့စားမှုတှကေို မှေးမွူနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ သကျသောငျ့သကျသာဖွဈတဲ့အခွအေနကေနေ ထှကျပွီး အတှေးအချေါအသဈတှလေကျခံခွငျး သို့မဟုတျ စိနျချေါမှုတှလေုပျရနျ စိတျပါဝငျစားခွငျးတှကေနေ စတငျနိုငျပါတယျ။ စှနျ့စားမှုရဲ့ ဆုလဒျတှကေ ကိုယျ့ကို စှမျးရညျအသဈတှနေဲ့ ကုမ်ပဏီက စီမ့ခနျ့ခှဲသူတှဆေီကနေ ကိုယျ့ကို ရာထူးတိုးပေးဖို့အတှကျ သဘောတူညီခကျြတှကေို ရရှိစပေါလိမျ့မယျ။
ဝနျထမျးတျောတျောမြားမြားက ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုထကျ ကိုယျ့အတှကျ ရပိုငျခှငျ့တှကေိုသာ စဉျးစားတတျကွပါတယျ။ ၉ နာရီကနေ ၅ နာရီထိ အလုပျလုပျတာက ကုမ်ပဏီအတှကျ လုံလောကျတယျ၊ ဒါကွောငျ့ နှဈတဈနှဈကုနျဆုံးတဲ့အခြိနျမှာ လစာတိုးပေးတာ၊ အပိုဆုငှရေတာက မလှဲမသှဖွေဈသငျ့တယျလို့ ထငျကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကုမ်ပဏီက ဘယျလောကျပွနျပေးနိုငျလဲဆိုတာက ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုပျေါမှာ မူတညျနပေါလိမျ့မယျ။ ကိုယျက ကုမ်ပဏီရဲ့အောငျမွငျမှုကို ရှရှေု့တယျ၊ ကုမ်ပဏီရဲ့ ဝငျငှတှေနေဲ့ လုပျငနျးစဉျတှကေို တိုးတကျအောငျ အလုပျလုပျတယျဆိုရငျ ကုမ်ပဏီမှာ ကိုယျ့ရဲ့တနျဖိုးကို ဖနျတီးပါလိမျ့မယျ။
စှနျ့စားတီထှငျသူတှရေဲ့အောငျမွငျမှုမှာ အရေးကွီးဆုံးရှုထောငျ့က အိပျမကျကွီးကွီးမားမားမကျခွငျးနဲ့ မဖွဈနိုငျ တဲ့အရာတှကေို ဖွဈအောငျပွုလုပျခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ လူတျောတျောမြားမြားက လကျတှကေ့ပြွီး တကယျဖွဈနိုငျ တဲ့အရာတှကေို တှေးကွတဲ့အတှကျ အိပျမကျတှကေ သေးငယျသထကျ သေးငယျလာကွပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အိပျမကျတှကေို စှနျ့လှတျဖို့ မလိုပါဘူး။ အမှနျက အိပျမကျကွီးကွီးမကျဖို့ပဲ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါမှသာ အိပျမကျတှကေို ရရှိဖို့ အငျမတနျကွိုးစားလာမှာဖွဈပွီး နောကျဆုံးမှာ ကွိုးစားမှုက တနျဖိုးရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့ရာထူးက ဘာပဲဖွဈပါစေ၊ စှနျ့စားတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျဖွဈပါ၊ ကိုယျလကျရှိ ရောကျနတေဲ့နရော မှာ အခှငျ့အလမျးတှကေို ရယူပါ။ စှနျ့ဦးတီထှငျသူတဈယောကျလိုမြိုး စိတျနသေဘောထားကို မှေးမွူခွငျးက ကိုယျ စိတျကူးထားတဲ့ အနာဂတျအတှကျ ပွငျဆငျနရေငျးနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ လကျရှိရာထူးမှာလညျး တိုးတကျမှုရရှိပွီး ကုမ်ပဏီအတှကျ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိစမှောဖွဈပါတယျ။
ထကျအာကာစိုးက ရနျကုနျအခွစေိုကျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈဦးဖွဈသလို ကနဦးလုပျငနျးရှငျတှအေတှကျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ဝနျးကငျြကိုဖနျတီးပေးနတေဲ့ Eco-system Builder တဈဦးဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျတှငျ Phandeeyar မှာ ကနဦးလုပျငနျးရှငျတှအေတှကျ အကွံပေးအနနေဲ့ လုပျဆောငျနပေါတယျ။ ပွဿနာတှေ ဖွရှေငျးခွငျးနဲ့ ဖနျတီးမှုတှပွေုလုပျခွငျးကို သဘောကသြူဖွဈပါတယျ။
Everyone is looking to achieve highest possible level of life satisfaction and financial progression no matter the position they are holding in the company. However, what separates the average person from those who are achieving greatness is mindset.
I advise people who want to strive for success to adopt an entrepreneur mindset even if you are an employee inacompany. Your entrepreneurial zeal will give youadistinct advantage in your professional life. Here’s are the seven steps to cultivate your mindsets to think and act more like an entrepreneur.
Entrepreneurs are famous for being immensely passionate about what they are doing. Passion allows you to be more than you think you can and drives you to your limits. It is the key to professional success and life fulfillment.
If you are not passionate about what you are doing, instead of daydreaming on what you could be doing, think about how you can progress your career to the area that you desire. Do not feel stuck in what you are doing, rather plan how your skill-sets will translate into another industry or department.
Corporate employees are often preoccupied with the tasks at hand and forget to focus on customers. The company’s customers are of course important, but there are other important stakeholders around you. You should regards your bosses, colleagues and everybody with whom you interact daily as your customer, and serve them well! You should consider how best you can satisfy their needs and improve your service. Your quality of service to your colleague and your boss will beabackbone to your career progression.
Take Ownership of Your Work
Taking ownership of your work is one of the biggest aspects of not only the successful entrepreneur but also for the successful professional. Instead of blaming others for mistakes and failure, take responsibility and always find ways to learn from mistakes to make it better. Instead of complaining about unfair treatment from team leaders and members, take initiative and beadependable member of your team. Take on challenging tasks and projects while keeping interest in your co-workers and their well-being.
Entrepreneurs have no tolerance for inefficiency. Since small companies often don’t have red tape and procedures, entrepreneurs can quickly change the way things are done to be more efficient.
While you might not be able to do it at the same pace, you still should think about the inefficiencies in your company and address the areas where you can make improvements to the process. It is your golden opportunity for you to create long-term value for the company and shine.
Take on More Risk
With more risk comes the better reward. Appetite for risk sets entrepreneurs apart from the average person. Every entrepreneur knows that you are to give itatry (or many tries) and that when the risk pays off, it will be worth it.
You can also cultivate your risk adversity at work, too. You can start by pitching your new ideas or volunteering to take on challenges that are outside of your comfort zone. The rewards of the risk will be you gaining new skills and approval from senior management of the company which may even land youapromotion.
Commit to the success of the company
Most employees think about their own entitlements more than the success of the company. Most think working9to5is enough for the company and thereforeapay raise and bonus at the end of the year is inevitable and well deserved.
However, how much the company can pay will ultimately depend on the success of the company. If you are committed to the success of the company and work to improve the company’s revenues and processes, you will create your value towards the company.
Don’t Limit your Dreams
The most important aspect of entrepreneurial success is dreaming big and making the impossible possible. Most people are conditioned to be realistic and practical, and asaresult, our dreams get smaller and smaller. There is no need for you to abandon your dreams. In truth, it is important for you to dream big. You will work harder to achieve your dreams but it will be worth it in the end.
No matter your position, be an entrepreneur and seize the opportunities to make the role your own. Cultivating an entrepreneurial mindset will enrich your role, create impact for your company while preparing you for the future that you dream about.
Htet Arkar Soe isaYangon based entrepreneur and eco-system builder, currently serving as Startup Consultant at Phandeeyar. He is passionate about solving problems and creating things.
Want to beaLawyer in Myanmar? Haveaclear WHY
How can I manage my time better?
How do I develop presentation skills?